कांग्रेस किन अलमलमा ? - मधेश प्रदेश डटकम
कांग्रेस किन अलमलमा ?
January 13, 2021 | 202 पटक हेरीएकाे
आफ्नै नेतृत्वमा संविधान निर्माण गरेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला त्यही संविधानको संरक्षणबाट चुकिरहेको छ ।
मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा पुरानो पार्टी कांग्रेस अहिले मझधारमा देखिएको छ । उसको आगामी कार्यदिशा के हो भन्नेमा ऊ आफैं अलमलमा देखिन्छ ।
सरकारले संसद विघटन गरेसँगै आन्दोलनमा जाने कि निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्नेमा नेताहरुबीच नै अन्योल देखिन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनःस्थापना भइहालेमा पनि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै सरकार गठन गर्ने मनस्थिति बनाएको खबर सार्वजनिक भएपछि कांगे्रसमा झनै मतभिन्नता देखापरेको छ ।
सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीसँग नरम देखिनुमा पनि कांग्रेसका नेताहरुबीच नै अनेकौं आशंका उब्जिएको छ । आन्दोलनबाट भन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिबाट फाइदा लिनुपर्ने धारणा देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । देउवाले कार्यसमिति बैठकमा संसद विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा जान नहुने बताएका थिए । उनले बरु निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यद्यपि, यसअघि पनि सभापति देउवालाई सरकारको पक्षमा नरम र आलोचनारहित बनेको आरोप लागेको थियो । संवैधानिक परिषद्बाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा प्रहरीका पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्द चयन हुनुमा पनि सभापति देउवाकै सिफारिस रहेको बुझिन्छ । भलै, देउवा सचिवालयले भने चन्द नियुक्तिमा सभापतिको हात नरहेको जनाएको छ ।
तर, सभापति देउवाको विमति हुँदाहुँदै पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको जोडबलका कारण कांंग्रेसले संसद विघटनविरुद्ध एकदिने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन ग¥यो । तर, विरोध प्रदर्शनमा पनि धेरैजसो नेताले निर्वाचनको तयारीतर्फ लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
यसले पनि कांग्रेस संसद पुनस्थापना होस् भन्ने चाहनामा देखिँदैन । बरु संसद विघटनविरुद्ध केही नबोलेको भनेर जनस्तरबाट आलोचना आउने देखिएपछि कांग्रेस आन्दोलनमा लतारिएको प्रष्ट हुन्छ ।
सभापति देउवा पक्ष राजनीतिक घटनाक्रमको जोखाना हेर्ने क्रममा छ । संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गएकाले र निर्वाचन आयोगमा नेकपाको विवाद पुगेकाले यी निकायको निर्णय पर्खनुपर्ने उक्त पक्षको भनाइ छ ।
सभापति देउवा सर्वोच्चबाट सरकारको निर्णय सदर भएमा निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने ध्याउन्नमा छन् । यदि संसद पु्नःस्थापित भएमा सरकारको बाटो खुल्ने र त्यता पनि विचार गर्नुपर्ने विचार उनको रहेको देउवा निकट नेताहरु जनाउँछन् ।
कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले निर्वाचनमा जान नडराउने बताए । उनले कांग्रेस अब निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने पनि जानकारी दिए । तर, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले भने संसद विघटन संविधानमाथिको प्रहार भएको भन्दै सरकारको धूँवादार विरोधमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । पौडेलकै जोडबलमा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकले पुस २५ गते ३ सय ३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा, माघ ३ गते ७ सय ५३ स्थानीय तहमा र माघ ८ गते स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा विरोध प्रदर्शन तथा सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
युवा नेता गगन थापा भने पार्टीलाई जनताले यसअघिको निर्वाचनबाट स्पष्ट रुपमा ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न निर्देश भएकाले कांग्रेसले सत्ताको ¥याल काढ्न नहुने सार्वजनिक रुपमा नै धारणा राख्दै आएका छन् ।
भलै संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे पनि कांग्रेसमा आन्दोलन, निर्वाचन कि सरकार भन्नेमा अलमल र मतभिन्नता प्रष्ट देखिन्छ । कांग्रेसले आफनो अडान र स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा प्रमुख प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी पनि पालना गर्न नसकेको आम अनुभूति छ ।
पार्टी एकतालाई ध्वस्त बनाएका ओलीबाट...
प्रीति रमण — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सेनाको मुख्यालयमा पुगेर राष्ट्रिय एकतामा जोड दिदै गरेको घटनाले सबैतिर राजनीतिक तरङ्ग...
प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न...
प्रीति रमण- प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा झनपछि झन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । विघटनको विरुद्धमा सबै क्षेत्र आन्दोलित भइरहेको छ ।...
मधेस फकाउ अनेक हथकण्डा अपनाउन...
जनकपुरधाम, माघ १२ गते । संसद विघटनपछि मुख्य राजनीतिक दलहरूले मधेसलाई सम्झिन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, नेकपाका विभाजित...
न्यायाधीशको जिम्मेवारी ख्याल ठट्टाको विषय...
गत साता अफगानिस्तानको सर्वोच्च अदालतका दुई जना महिला न्यायाधीशहरुको हत्या भएको छ । यो घटनाले संसारभरिकै अदालतका न्यायाधीशहरुमा आतंक मच्चिएको...
‘नाभाल्नी तत्काल रिहा हुँदैनन्’
मस्को — रुसले विपक्षी नेता नाभाल्नीको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । मस्कोले नाभाल्नीले विशाल विरोधका...
गैरजिम्मेवार ओली सरकारले कृषि क्षेत्रमा...
प्रीति रमण- जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन खोज्नु गम्भीर खालको...